अमला - यो के छ? यदि तपाईं लोक चिकित्साको एक सम्बोधन हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यस उपायको बारेमा सुन्नुभएको छ, र यदि होइन भने, तपाइँ निश्चित रूपमा उहाँलाई जान्नैपर्छ।
यहाँ तपाईंले यो बिरुवाको औषधि गुणको बारेमा पढ्नुहुनेछ। यसलाई कसरी लागू गर्न र AML को सहायता संग आफ्नो कपाल को हेरविचार गर्ने बारे। तेल र पाउडरको प्रयोगमा अलग ध्यान आवश्यक छ। एकपटक तपाईंले यो बिरुवा प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईं परिणामसँग सन्तुष्ट हुनुहुनेछ।
अमला के हो?
के तपाईं अम्मला जस्तै यस्तो अद्भुत उपायको बारेमा सुन्नुभएको छ? हामी यो थाहा पाउनेछौं कि यो तल छ।
यो बिरुवा पारंपरिक औषधि मा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ, दोस्रो नाम छ - भारतीय गोसेबेरी। यस्तो रूखको उचाइ पाँच मीटर सम्म पुग्छ, यसको छाल खैरो छ, पातहरू सानो हुन्छन्, र फलहरु रंगमा हल्का हरियो हुन्छन्। जब जामुन पाइप हुन्छ, उनीहरूको रङ्ग भूरी-रातो र पहेंलो हुन्छ, र स्वाद धेरै खट्टा छ। यस्तो सुन्दरता भारतको जंगलहरूमा बढ्छ।
जब बेरीज अझै पनि हरियो हुन्छ, तिनीसँग डेरिचर र अल्टिभाइरेन्ट प्रभाव हुन्छन्, पाचन मद्दत। र फूल एक ठुलो हो।
फलले ascorbic एसिड र धेरै उपयोगी खनिज समावेश गर्दछ। रस को तयारी को लागी, केवल ताजा सामाग्री को उपयोग गर्नुहोस। एम्बूलाई गोलाकार, मिश्रण, पाउडर, मास्क र क्यान्सरको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्।
ड्रग्स विभिन्न रोगहरु को उपचार गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ: जस्तै एनीमिया, निमोनिया, मधुमेह, श्वसन समस्या, तपेदिक, वायरल संक्रमण। उत्पादनले शरीरको तापमान घटाउँछ र लिभर सफा गर्छ।
एलाला बिरुवा एक झाडी जस्तो हो, प्रायः यसलाई भारतको चिसो भनिन्छ। हर वर्ष वसन्तमा यो खिल्न सुरु हुन्छ, यसलाई बनाइएको हो हरियो रंगको सानो फल। तिनीहरूसँग पोषक तत्वहरूको एक विशाल दायरा छ। एक बेरीमा नींबूको रूपमा दुई भिटामिन धेरै भिटामिन सी हुन्छ। यसको अतिरिक्त, यसमा फस्फोरस, जस्ता, क्यालसियम, क्रोमियम र तांबेको एक ठूलो मात्रा छ। भारतीय गोसेबरले फ्रिक्वेसनको हड्डीको छिटो उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
महिलाहरूको लागि, यो पोल अमूल्य छ। अमलाका फलहरू छाला र शरीरका सबै अंगहरू पुनरुत्थान गर्छन्। उनीहरूले राम्रो रक्त परिसंचरणलाई बढावा दिन्छन्, हृदयलाई बलियो बनाउँछ, र हार्मोनल चक्रलाई स्थिर बनाउँछ र अवधारणालाई बढावा दिन्छ। एलाला काउन्ट बालेर हानिको सबै उपयोगी घटकहरू, र समान रूपमा प्रभावकारी रूपमा भित्र र बाहिर दुवै काम गर्दछ।
भारतीय घुसपैठ भेट्दा उपचारहरूले हाम्रो छाला पराबैंगनी किरणहरूबाट जोगाउँछ, यसलाई नरम पार्नुहोस्। भित्रको अचम्म लाग्ने औषधिको प्रयोगले चयापचय गति बढाउन मद्दत गर्नेछ, जसले वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ।
साथै भारतमा बाल एएलएल व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो उपकरणको प्रयोग धेरै सरल छ तर प्रभावकारी छ। यसमा एक सुखद चिन्तन छ, कर्ल बलियो र तिनीहरूलाई चमक दिन्छ। यसकारण, जो गर्भवती महिलाहरूको ब्र्रिडहरू प्रयोग गर्छन्, धेरै लामो छन् र ठाडो हेर्छन्।
यस तेलको लगातार आवेदन पछि रेशमी र अधिक घने हुन्छ। र यो औषधि पनि बल्बहरूमा डर्मिस लेयरको माध्यमबाट हुन्छ र तिनीहरूलाई बलियो बनाउँछ। एक महिना राम्रो परिणाम देख्नेछ।
अमला एलर्जी प्रतिक्रियाहरू प्रवाह गर्दैन र सुरक्षित चिकित्सा हो। यो राम्रो खोप टोन हुन्छ, जलन रोक्छ, झन्डा झगडा, पराबैंगनी किरणहरू, ठुलो र कडा पानीबाट बालको सुरक्षा गर्दछ।
सबैले अमाला जस्तो अचम्मको औजारको बारेमा सुनेनन्। यो के हो, तपाई ब्यूटी सैलूनमा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। र इन्टरनेट वा फार्मेसियों मा सजिलै संग किन्नुहोस्।
बालको तेल लागू गर्ने तरिका
उपचारको लागी, तपाईंलाई थोडा धैर्य र समय चाहिन्छ। यस औषधिको एक मात्र प्रयोगको साथ प्रभावकारीता धेरै कम हुनेछ, त्यसैले तपाई थेरै थोरै थेरेपीमा जानुहोस्।
पहिलो, कपाल हर्बल शैम्पूसँग धोएको हुनुपर्छ, तपाईंलाई कंडीशनर प्रयोग गर्न आवश्यक छैन;
आफ्नो तालाहरू टाँस्नुहोस् र ताला लगाउँनुहोस्, खोपमा सानो मात्रामा तेल लागू गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो सम्पूर्ण कपालको माथि फैलाउनुहोस्;
तपाईंको औंलाहरु संग एक खोपड़ी मालिश गर्न को लागी धेरै मिनेट लाग्छ;
त्यसपछि तपाईं एक रोटीमा कपाल जम्मा गर्न आवश्यक छ, पोलीथाइल टोपीमा राख्नुहोस् र न्यानो कुखुरामा राख्नु पर्छ;
मुखौटा एक घण्टाको लागि रातोमा बाँड्न सकिन्छ वा रातमा गरिन्छ।
केहि समय पछि, शम्पू संग दुई पल्ट राम्रो तरिकाले धोएं र पानी संग कुल्ला र नींबूको रस जोड्नुहोस्;
कपाल आफैले सुकेको हुनुपर्दछ, त्यसोभए तपाइँ प्रत्येक कडा कपाललाई जोड्नु पर्छ।
र पहिलो प्रयोग पछि तपाईंले अमला काम गर्दै कसरी हेर्नुहुनेछ। औषधि एक हप्तामा दुई पटक भन्दा बढी एक महिनाको लागि प्रशासित हुन्छ।
र पनि तेल राम्रोसँग बलियो र कपाल रंगको दृढताको लागि उपयुक्त छ। यो शैम्पूमा एक चम्मच थप गर्नु पर्छ र टाउको पछि आफ्नो टाउको धुनु पर्छ। यो उपकरणले तालिमहरूलाई स्वस्थ उपस्थिति र सुन्दर चमक दिन मद्दत पुर्याउनेछ।
AMl को लागी विधि: शरीरको लागि पाउडर
सबै स्त्री जो आफ्नो छाला चमक गर्न र लचीला हुन चाहन्छन्, विशेष नुस्खाको अनुसार उत्कृष्ट उपाय प्रयोग गर्न सक्दछ। बिरुवा, पाउडर जस्तै एक बोटबाट बनाउनुहोस्। यसको प्रयोगमा टिप्पणीहरू केवल सकारात्मक छन्।
अवस्थाहरू प्रयोग गर्नुहोस्:
1. आधा कपको पानीले पाँच ग्राम पाउडर लिन्छ र सबै चीज मिलाउँदछ। यो प्रक्रिया भोजन पछि एक दिन दुई पटक हुनुपर्छ। प्रवेशको अवधि चालीस दिन हो। यो पेयमा सम्पूर्ण शरीरमा राम्रो प्रभाव छ र यसको उचित कार्यलाई असर गर्छ।
2. जवान अनुहार छाला र डेलोलेटले क्षेत्र राख्न, यो एक लिटर गर्म पानीको साथ चार चम्मच सुचारु मिश्रण जोड्न र मध्यम तापमा राख्नु आवश्यक छ, पाँच मिनेटको लागि पकाउनुहोस्। त्यसपछि परिणामस्वरूप उपाय ठुलो हुनुपर्छ र रातको लागि एक ठुलो ठाउँमा राख्नुपर्दछ। र बिहानको धुलोको लागि यो भाइरस प्रयोग गर्न।
3. यो पाउडर बच्चाहरूको लागि राम्रो उपकरण हो। यसको भिटामिन शरीरमा प्रतिरक्षाको वृद्धिमा योगदान गर्दछ। औषधि उनलाई एक दिन तीन ग्रामको लागि दिन दिन पर्याप्त छ।
हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि परम्परागत औषधिमा थुप्रै उपयोगी उपकरणहरू छन्। ती मध्ये एक अमला छ। यो के हो, तपाइँ पहिले नै थाहा छ।
सानो फलामको साथ यो बिरुवा, जो औषधीय गुणहरुमा धनी हुन्छ। जमिनले धेरै मात्रामा भिटामिन सी समावेश गर्दछ, जसले विभिन्न रोगहरूलाई रोक्छ।
अमला हृदय रोग को उपचार मा योगदान गर्दछ। यस उपचारको प्रयोग पछि, हृदयले सजिलै सम्पूर्ण रक्तचाप प्रणालीको माध्यमबाट रक्त चलाउन सक्छ, जसले मानव स्वास्थ्यमा सुधार गर्दछ।
बिरुवाबाट हर्बल रस बनाउन, जसले आँखा रोगहरू, जस्तै conjunctivitis र ग्लूकोमा मद्दत गर्दछ। यदि तैयारीको लागि सानो हड्डी थप्नु हुन्छ भने, तपाईं आँखाको दबाव कम गर्न सक्नुहुन्छ।
दस्त र पनीरबाट हटाउनको लागि, अमला (पाउडर) राम्रो छ। नींबूको रस को अतिरिक्त संग सूखी रूप मा यसको आवेदन एक प्रभावी ढंग देखि जीवाणु रोगहरु लाई लडने को अवसर हो।
चिकित्सकीय मिश्रण मा मधुमेहहरु लाई इन्सुलिन मा मदद गर्दछ, विटामिन सी को ठूलो मात्रा को लागी धन्यवाद, रगत मा चीनी को स्तर सामान्यकृत गर्न को लागी।
अमलाको प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ बनाउन योगदान गर्दछ, शरीर को भित्र हानिकारक भाइरस को विनाश।
सबैजना युवा र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न चाहन्छु, एक अमला बिरुवा अविश्वसनीय मदतकारी हुनेछ!
कपाल कपाल - सीजनको प्रवृति
कसरी व्यक्तिगत डायरी साधारण मान्छे सञ्चालन गर्न बारेमा केहि नियम
Pentatonic - यो ... परिभाषा उदाहरण